HUAWEI Y6 Pro 2019, Dewdrop HD Display, Unique Colour Shell Design | HUAWEI Myanmar
သဘာဝရဲ့အရိပ်လေးသဖွယ်ပုံစံလေးက ခေတ်မီလှပတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စေပါတယ်။ ဒီအနက်ရောင်က အမှောင်ပုံစံ၊ ရိုးရှင်းသေသပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာကြောင့် မြင်ရသူတိုင်း နှစ်သက်စေမှာပါ။
အကန့်အသတ်မဲတဲ့ ကမ္ဘာသစ်တစ်ခုကို 6.09 လက်မရှိတဲ့ HD+ Dewdrop Display မှာရှာဖွေလိုက်ပါ။ ဒီမျက်နှာပြင်က 87% မျက်နှာပြင်-ဖုန်းကိုယ်ထည်အချိုး1 ရှိတာကြောင့် စာဖတ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် HUAWEI Y6 Pro 2019 က TÜV Rheinland ရဲ့ထောက်ခံချက်ရရှိထားပြီး မျက်စိထိခိုက်နိုင်တဲ့ အပြာရောင်အလင်းတွေကို တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြီးပြည့်စုံတဲ့ 8 MP ဆယ်လ်ဖီကင်မရာ
HUAWEI Y6 Pro 2019 မှာပါတဲ့ 8 MP ရှေ့ကင်မရာက အဆင့်မြင့်တဲ့ Selfie Toning Flash 2.0 စနစ်ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် အလင်းရောင်နည်းပါးတဲ့အခြေအနေမှာတောင် သေသပ်စစ်မှန်ပြီး သဘာဝကျတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ရရှိစေမှာပါ။
*ဖော်ပြပါပုံသည် ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်သက်သက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဖုန်းဖြင့်ရိုက်ကူးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။
13 MP ကျောဖက်ကင်မရာနဲ့ အကောင်းဆုံးတွေကို ဖမ်းယူလိုက်ပါ။ f/1.8 ထိကျယ်တဲ့ Aperture Lens က ၅၀% အထိ အလင်းပိုမိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။2 အဲ့ဒါကြောင့် အလင်းရောင်နည်းနေချိန်မှာတောင် အရည်အသွေးကောင်းပြီး တိကျသေသပ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရနိုင်ပြီပေါ့။
HUAWEI Y6 Pro 2019 က 6db အသံ3 ကို ပိုကျယ်တဲ့ Bass Effect တွေထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုး စပီကာတစ်လုံးလို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တာကြောင့် အိမ်မှာနားထောင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ပါတီလုပ်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကမ်းခြေမှာအပန်းဖြေနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေစေပြီပေါ့။ ဒါ့အပြင် FM Radio ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်တာကြောင့် နားကြပ်တပ်ထားစရာမလိုပဲ နားဆင်နိုင်ပြီပေါ့။
12nm chipset နဲ့3+ 32 GB ကိုမှ ထပ်ပြီး SD သုံးနိုင်တာကြောင့်4 HUAWEI Y6 Pro 2019 က အားရပါးရသိမ်းဆည်းနိုင်သလို App တွေ Run တဲ့အခါမှာလည်း ပိုမိုချောမွေ့လာပါတယ်။
HUAWEI Y6 Pro 2019 က 3020 mAh5 ဘက်ထရီပမာဏနဲ့ဖြစ်ပြီး အသိဉာဏ်မြင့်ဘက်ထရီချိန်ညှိမှုလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလို Software နဲ့ Hardware ပူးပေါင်းအလုပ်မှုကြောင့် ဘက်ထရီကပိုပြီးခံနိုင်ပြီပေါ့။
EMUI 9.0 နဲ့ AndroidTM 9.0 Pie
EMUI 9.0 က ရိုးရှင်းတယ်၊ သေသပ်တယ်။ ပြီးရင်း Software ပိုင်းမှာ အဆင့်မြင့်တယ်။ မျက်နှာပြင်အပြည့်အထိအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Gesture Navigation နဲ့ System ရဲ့ လျင်မြန်မှုကို အသိဥာဏ်မြင့် ချိန်ညှိမှုကြောင့် ဖုန်းသုံးတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးလျင်မြန်ချောမွေ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရရှိစေမှာပါ။
May update to EMUI 9.1 for better experience
အလင်းရောင်နည်းချိန် Face Unlock စနစ်
လျင်မြန်ပြီး တုံ့ပြန်မှုကောင်းတဲ့ Face Unlock စနစ်ကြောင့် အလင်းရောင်နည်းပါးချိန်မှာတောင် Unlock ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
1. Huawei Dewdrop မျက်နှာပြင်ဆိုတာကတော့ သေးငယ်တဲ့အနားသတ်၊ ကြီးမားတဲ့မျက်နှာပြင်အချိုးနဲ့ သေးငယ်တဲ့ Notch ဒီဇိုင်းမျက်နှာပြင်ကို ဆိုလိုပါတယ်။ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားရဲ့ ခန့်မှန်းခြေတိုင်းတာမှုက ပုံသေဖြစ်ပါတယ်။ *မျက်နှာပြင်-ဖုန်းကိုယ်ထည်အချိုးတွက်ချက်နည်း - AA area / front TP area
2. ပုံမှန် f/2.2 Aperture Lens တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။
3. HUAWEI SuperSound အသံစနစ်မပါဝင်တဲ့ အခြားဖုန်းများဖြင့်နှိုင်းယှဉ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ရလဒ်များသည် Huawei စမ်းသပ်ခန်းမှဖြစ်သည်။
4. 512 GB အထိ MircoSD ထပ်စိုက်နိုင်ပါသည်။
5. 3020 mAh က ပုံသေပမာဏဖြစ်ပြီး Huawei ၏ စမ်းသပ်ခန်းမှ ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ဘက်ထရီပမာဏသည် အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုကို မူတည်ပါသည်။